Fitsangantsanganana an-tsolika sy divay " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Gastronomika sy fitsangatsanganana divay
Ny fitsangatsanganana gastronomic dia mampifangaro lesona amin'ny culinary, manandrana ny sakafo matsiro sy zava-pisotro, mitsidika ny lakozian'ny lafaoro malaza. Noho izany, afaka mifankahalala amin'ny natiora ianao, mifantoka amin'ny fomba fiaina sy kolontsaina misy ao amin'ny faritra voafantina.
Inona ny fitsangatsanganana gastronomic
Firenena tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana gastronomika sy divay
Ny fitsangatsanganana gastronomic dia dia fitsangatsanganana izay tokony ho olom-pantatra miaraka amin'ny fikarakarana amin'ny firenena na faritra ny singa lehibe. Mandritra izany fotoana izany, dia mety ho mifameno amin'ny fandalinana mahasarika ny toerana eto an-toerana izy io. Azonao atao ny misafidy fitsidihana miaraka amina endri-javatra sasany ary ho hitanao ho anao ny fambolena sy famokarana sakafo matsiro avy ao anatiny, ary koa andramo ny tena Parma ham, ny keso Dutch, ny jamon espaniola, ny prusines Brussel, ny puffer ao afovoan-trano fisakafoanana malaza voamariky ny kintana Michelin.
Ny fitsangantsanganana maro dia misy ny kilasy master izay hain'ny chefs angano ary mamela anao hianatra ny mahandro sakafo lovia malaza amin'ny alàlan'ny zest manokana sy tsiambaratelo avy amin'ireo tompona nahandro nahandro.
Ny fatran'ny zava-pisotro dia nomen'ny fandaharana amin'ny fizahan-tany misy gastronomic. Na izany aza dia afaka misafidy fitsidihana divay manokana ianao, izay hafa noho izany fa mifantoka amin'ny divay amin'ny faritra iray manokana izy io. Ny fitsangatsanganana divay mankany Bordeaux, Champagne, Chianti, Skotlandia ary firenena sy faritra maro hafa dia malaza.
Ny fitsangatsanganana Gastro dia azo zaraina ho sokajy 2 lehibe miaraka amin'ny fepetra tokony hananana: ny tanàna sy ny ambanivohitra... Mandritra ny fitsidihan'ny tanàna dia azon'ny mpizahatany atao ny mankafy vokatra voajanahary noforonina "teto an-tany". Azo atao ny mandray anjara manokana amin'ny fanangonana voaroy, voanjo, holatra (ohatra, truffles), azonao atao ny manangona voankazo mivantana avy amin'ilay hazo, ary koa legioma avy amin'ny zaridaina. Azo antoka fa ho sariaka amin'ny tontolo iainana izy ireo. Indraindray ianao dia afaka manokana (eo ambany fanaraha-mason'ny chef efa za-draharaha, mazava ho azy) manao jam na mofomamy. Ny fitsangatsanganana any ambanivohitra dia manolotra ihany koa hahafantatra ny vokatra manome voninahitra ny faritra iray: ham (Iberia, Espaina), ham (Parma, Italia), tsaramaso (Pays-Bas), pralines (Brussels, Belzika), mivonto ro (Soeda), fugu (Japon) sy ny maro hafa.
Mandritra ny fitsangatsanganana ara-tsakafo ao an-tanàna dia azonao atao ny mitsidika trano fisakafoanana manokana momba ny sakafo nasionalin'ny firenena iray. Entanina ny vahiny mba hanandrana santionany amin'ny sakafo matsiro manokana, izay matetika no omanin'ireo mpahandro malaza. Mandritra izany fotoana izany, ny trano fisakafoanana matetika matetika dia manana kintana Michelin 1 farafaharatsiny. Amin'ny dia toy izany dia ny fampifangaroana akora maro no tena antitranterina fa tsy mankafy ny tsiro mahazatra ny sakafo "firenena". Raha lazaina amin'ny teny hafa, ho an'ireo izay tia ny fandosirana ny sivilizasiôna dia mety ny fitsangatsanganana any Tuscany na Alsace, ary ireo izay mitady hanandrana lovia tsy fahita any Shina misy servisy fotsy misy fotsy fotsy dia mahazo mandeha any amin'ny trano fisakafoanana any Paris na any Milan.
Raha tsy misy divay dia tsy azo inoana ihany koa ny fitsangatsanganana toy izany. Na dia misy ny fitsangatsanganana divay manokana aza, ny divay (na ny zava-pisotro misy alikaola) dia azo antoka fa tafiditra ao amin'ny fandaharana gastro-tour, satria efa fantatry ny rehetra fa ny tsiron'ny ankamaroany na ny lovia voadio tena tsy misy divay very ny sasany amin'izany.
Ny faharetan'ny fitsangatsanganana gastronomika dia miovaova be, manomboka amin'ny faran'ny herinandro (programa ao an-tanàna, ohatra, oysters any Paris), ary mifarana amin'ny fisitrihana feno ao anaty ranomasina be dia be (ohatra: fitsangatsanganana ambanivohitra mankany Puglia).
GAS ARY FAHAFAHANA
Sakafo Thai, misy tsiro aziatika tsy manam-paharoa, manana tsiro mamiratra sy tsy manam-paharoa. Matetika ny lovia eo an-toerana dia masiaka ary ampiarahina amin'ny dipoavatra, veromanitra ary tongolo lay. Ohatra, ny trondro misy saosy Thai dia mendrika fiheverana manokana ...
Na andramo ny paty miaraka amin'ny hazandranomasina na sombin'akoho feno hena ...
Ny fijerena manokana dia tokony homena amin'ny fitsabahana an-tsakafo an-tsakafo voankazo matsiro an-toerana. Ny fitambaranana toa tsy mifanentana ary toa tena mahasalama làlana azo alaina dia alaina.
Ny tombony azo amin'ny sakafo any an-toerana dia ny vokatra vaovao sy avo lenta. Tsy tian'izy ireo koa ny manafina ny tena tsiron'ny sakafo amin'ny zavatra hafa. Ny malaza indrindra dia ny mofo vaovao, voatabia mavokely ary trondro vaovao avy any Mediterane.
Ary iza no malaza eran-tany
hodi-biby kely amin'ny mpandeha hazo
Ary ny tsindrin-tsakafo eto an-toerana dia afaka mamono ny mpitia zava-mamy rehetra 🙂
Ny sakafo ao an-toerana dia manana ny lazany ho iray amin'ireo matsiro indrindra eto amin'izao tontolo izao. Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny firindrana sy ny fifandanjana: ny voankazo sy ny legioma dia manohitra ny zava-manitra mafana sy hena.
Malaza eran'izao tontolo izao dim sum (adika hoe "hikasika am-pitiavana")
Saosy Saosy mahery vaika mahavariana
Fantatry ny sinoa koa ny momba ny tsindrin-tsakafo! 🙂
Ity firenena ity dia malaza amin'ny fromazy, champagne, snails ary baguettes. Ny frantsay dia miavaka amin'ny fitiavany ny sakafo hariva lava, feno lovia maro karazana sy sakafo faran'izay mahafinaritra. Ny faritry ny divay lehibe dia ny Bordeaux malaza, izay manome "mena" mitohy mitahiry kaontera manerana an'izao tontolo izao.
Am-polony mahery ny gourmet cheeses manerantany
Ary aza adino ny croissants ho an'ny sakafo maraina 😉
Ny fitsangatsanganana gastro mankany amin'ity firenena ity dia mety amin'ny gourmets tena maniry ny hahita tsiro sy tsiro vaovao tanteraka. Misy ny fahafahana manandrana khinkali, khachapuri, tsiro maro an-toerana, churchkhela ary lovia maro tsy mahazatra.
Any Georgia, toa any an-toeran-kafa dia mahafantatra zavatra betsaka momba ny henan-kena 😉
Kara-panitra isan-karazany ihany koa no misy ao amin'ny sakafo nahitana an'i Georgia.
Nanomboka nampiharina teto i Winemaking 3,5 XNUMX taona lasa izay. Io firenena dia malaza amin'ny karazam-boaloboka an'arivony izay maniry irery eto. Ny iray amin'ireo faritra manankarena indrindra dia i Tuscany, izay mamokatra karazana divay an-jatony.
Aza adino ihany koa fa teraka tany Italia ny pasta, izay midika fa maro no mahafantatra azy io mihoatra noho ny any an-tany hafa.
Ary niparitaka nanerana an'izao tontolo izao ny pizza .. Teto koa izy teraka, eto no mari-pahaizana, noho ny zavakanto culinary!
Ity firenena ity dia fantatra amin'ny fivoarany sy ny hetahetany. Ny divay dia novokarina teto mety: manitra be, masiaka, mandrisika hanao zavatra tsy ampoizina. Na izany aza, ny nahandro eo an-toerana ihany koa dia tokony hojerena - jamon, voankazo sy oliva vaovao, hazan-dranomasina ary lovia avy amin'izy ireo.
Rice Paella. Lovia nasionaly espaniola.
Snack ho an'ny labiera na divay. Mety ho inona izany :), avy amin'ny tsaramaso, sakamalaho na oliva hitoerana tanteraka lovia kely mini.
Ary aza adino ny manandrana ny sakafo matsiro Espaniola nasionaly -
Izy no mpitondra eo amin'ireo repoblika sovietika taloha tamin'ny famokarana divay. Amin'ny faritany kely iray amin'ity firenena ity, dia misy zava-pisotro misy alikaola misy tanjaka sy tanjona maro samihafa, atomboka amin'ny "sampani" (izay, raha ny tena izy, dia nankasitrahan'ireo mpamokatra champagne frantsay tena izy) sy divay latabatra, nifarana tamin'ny kôpera - "divay" sy marika vodka isan-karazany.
Fetiben'ny divay marobe no atao any Moldova
Ny faritry ny divay malaza Stellenbosch (ivon-divay tena ilaina eto amin'ity firenena ity) dia tsy vitan'ny hoe mamokatra chardonnay sy sauvignon manjavona fotsiny, fa manome azy ireo tsiro manitra, fofona manokana ary sakafo matsiro "maharitra" maharitra.
Ny fandinihana tsara, mazava ho azy, dia ilaina ihany koa ny lovia amin'ny ranomasina.
Ny solontenan'ireo vahoaka samihafa eto amin'izao tontolo izao dia efa nipetraka tany Afrika Atsimo nandritra ny taonjato maro, izay samy hafa be ny sakafo ao aminy
Amin'ny Isiraely maoderina, karazan-divay maro no vokarina, miainga amin'ny divay frantsay tsara tarehy izay miorim-paka eto ary mifarana amin'ny fomba fijery teratany tanteraka.
Mendrika ny hijerena ny nahandro israeliana, izay manambatra ireo singa amin'ny nahandro saika ny olona rehetra manerantany.
Aza adino ny momba ny teas, zava-manitra, zava-mamy. Misy zavatra rehetra tianao;).
Ny dia gastronomika na divay dia paleta manaitra izay ahafahan'ny mpizahatany mandoko ny fahitan'izy ireo manokana ny firenena iray. Ny sakafo sy zava-pisotro dia ahafahanao mampiharihary ny fanahin'ny firenena rehetra sy hahatakatra ny fihetsika ...